Préfet de Police : “Tsy nisy fahazoan-dalana hidina an-dalambe sy hamory olona” | NewsMada
Préfet de Police : “Tsy nisy fahazoan-dalana hidina an-dalambe sy hamory olona”
Par Taratra sur 31/03/2016
“Ny anjaranay, namoaka fahazoan-dalana hametraka voninkazo. Misy tohiny ve? Tsy ao anatin’ny fahazoan-dalana intsony izay. Raha fidinana an-dalambe sy famoriana olona no hitantsika afakomaly, tsy nisy fahazoan-dalana. Dia nandray ny andraikitra ny eo anivon’ny mpitandro filaminana.”
Fanazavan’ny lefitry ny préfet de Police, Rafidison Fidèle, teny Tsimbazaza, omaly, io, momba ny zava-nitranga tamin’ny fanateram-boninkazo notarihin’ny loholona Lylison René de Roland, teny amin’ny Fasan’ny maherifo, Andrainarivo, afakomaly.
Nandefasana dika mitovy toy ny fanao izay fahazoan-dalana izay ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, ny Emmo/Reg sy ny Emmo/Far. Fahazoan-dalana hametraka voninkazo no azony: an’iza ny fahadisoana? “Tsy anjaranay ny mijery an’izay”, hoy ny lefitry ny préfet de Police.
Mbola mikatona ny kianjan’ny Demokrasia, Ambohijatovo
Raha ny kianjan’ny Demokrasia, Ambohijatovo, mbola mikatona aloha hatreto. Nosokafan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) io. Tsy maintsy mijery ny prefet de Police hoe mety izany sa tsia, raha ny nambarany. Ho fitandroana ny filaminana, tsy omena alalana izay manao fangatahana hamory olona eny. Manome ny toerana ny CUA, fa manome fahazoan-dalàna hanao ny hetsika ny prefektiora.
Efa be ny zava-nitranga teto amin’ny firenena. Anjaran’izy ireo ny mijery hoe mety mankaiza ny famoriam-bahoaka amin’izany, arakaraka ny zava-mitranga. “Efa misy fotoana nanomezana fahazoan-dalana hanao famoriam-bahoaka, fa mijery ny tombontsoan’ny besinimaro no ataonay”, hoy ihany izy.
Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaha? Nilaza ny loholona Lylison René de Rolland fa tsy nanaja lalàna ry jeneraly Rakotomahanina Florens.